Olu luthotho oluphumelele ibhaso kwi2022 Golden Globes | Bezzia
Olu luthotho oluwongwe kwi-Golden Globes ka-2022
UMaria vazquez | 13/01/2022 12:00 | Iindaba
La Uhlelo lwama-79 lweGolden Globes, iHollywood Foreign Press Association Awards, yabanjwa nge-10 kaJanuwari. Kwakungekho ikhaphethi ebomvu okanye igala njengoko kunokulindeleka kwaye ukuhanjiswa kwancitshiswa kwisenzo sabucala apho abaphumeleleyo bafundwa khona.
Emva kwezityholo zorhwaphilizo kunye nokungabikho kweyantlukwano, iGolden Globes iye yasasazwa ngokungakhathali okukhulu nangona amajelo eendaba awazange athandabuze ukuvakalisa abaphumeleleyo. Kwaye kudidi lukamabonakude kubekho into enye engenakuphikiswa: I-HBO's 'Succession'
3 Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba
USuccession ebeyintandane kwicandelo likamabonakude kwaye akazange ashiye elambatha. I Idrama yosapho lwe-HBO Ayiphumelelanga kuphela iGolden Globe yolona chungechunge lwedrama ibalaseleyo kodwa ikwaneimbasa ezimbini zabalinganiswa bayo: uSarah Snook, oyena mdlali ubalaseleyo oxhasayo, kunye noJeremy Strong oyena mdlali weqonga ubalaseleyo.
Olu luhlu lubalisa i Iimbandezelo zoSapho lwakwaRoy, ULogan Roy kunye nabantwana bakhe abane. Owayesakuba ngumnikazi wendibano yeendaba kunye neenkampani zolonwabo abantwana bakhe abane asele bephupha ngokuzifumana. Ke olu ngcelele lulandelela ubomi babo njengoko becinga ukuba ikamva libaphathele ntoni xa usolusapho eshiya inkampani. ”
Intsomi ka-Adam McKay ikhuphisane kudidi lwayo ne-'Pose', 'The Squid Game', 'The Morning Show' kunye 'neLupin', kodwa ezi azinakwenza nto ngokuchasene nolu ngcelele ludityanisiweyo lwesizini yalo yesithathu, luzele zizinto ezothusayo kunye nokutyikitya okutsha, lushiye abadlali becala. imeko enzima kakhulu.
IiHacks zabekwa njenge eyona comedy yonyaka phambi kokuthanda kukaTed Lasso. Olu ngcelele belukhokele phambili kolona chungechunge lubalaseleyo lonyaka kangangeenyanga, kodwa akude kube nge-15 kaDisemba xa eSpain siye safumana ithuba lokuyibona. HBO Max.
Izahluko ezilishumi zenza ixesha lokuqala loluhlu olunezahluko ezifikelela kwimizuzu engama-25 ubude. Yenziwe nguLucia Aniello, uthotho lweenkwenkwezi amaqhula amabini amiselwe ukuqondana. UDeborah Vance, i-monologue diva ebeka umboniso ngobusuku bonke bonyaka kwindawo yekhasino yaseLas Vegas, ikwelinye icala lecebo. U-Ava Daniels, isithembiso esincinci sokuhlekisa umsebenzi wakhe wanqunyulwa emva kwe-'tweet 'engelishwa, kwelinye.
Ejongene nokucinywa okunokwenzeka kwamanye amanani akhe, uDeborah Vance, odlalwa nguJean Smart, unyanzelekile ukuba amkele uncedo luka-Ava Daniels omtsha, odlalwa nguHannah Einbinder. Ubudlelwane phakathi kwabo Kuya kuba nzima ekuqaleni, kodwa ngaba kuya kuba ngcono?
Uthotho olwaqalayo e-United States nge-13 kaMeyi, 2021 laphumelela iimbasa ezintathu kwiiMbasa ze-Emmy zokugqibela, apho ngoku yongezwa iGolden Globe yolona chungechunge lubalaseleyo lwamahlaya okanye lomculo. Ngaba uza kuyinika ithuba?
Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba
Ngokusekelwe kwincwadi enegama elifanayo Ukusuka kwi-Pulitzer Prize-winning Colson Whitehead kwaye yenzelwe isikrini esincinci nguBarry Jenkins, umlawuli ophumelele i-Oscar we-Moonlight, i-Underground Railroad iphumelele i-miniseries engcono kakhulu kwi-Golden Globes.
Le Amazon Prime Video miniseries isazisa kwiCora (edlalwa nguThuso Mbedu), ikhoboka eliqhwesha emasimini apho ahlala khona kwaye ehamba kumazwe ahlukeneyo enkosi kuloliwe ongaqondakaliyo ongaphantsi komhlaba. Ingqikelelo eyilwe nguWhitehead ukuchaza indlela elungelelaniswe ngokugqibeleleyo eyenza kube lula ukuba amakhoboka afikelele enkululekweni yawo.
Yaye kwenzeka ukuba ekuqaleni kwenkulungwane ye-XNUMX, ngoncedo lwabo babebuchasile ubukhoboka, a inethiwekhi eyimfihlo ukunceda ukukhokela amakhoboka kumazwe akhululekileyo elizwe. Ngaloo ndlela, phakathi kwe-1810 kunye ne-1862 le nethiwekhi "yabaqhubi" kunye "nabaphathi besikhululo", abantu abakhokelayo kunye nabantu abafihla ababaleki ezindlwini zabo, ngokulandelelana, kuqikelelwa ukuba malunga ne-100.000 abantu basindiswe.
Ukongezelela ekuboniseni ngokungekho mthethweni ubomi bamakhoboka emasimini, ukuzibophelela kwi ubunyani bomlingo ukwazisa izinto ezinamandla ezivumela ukwakha iibhulorho phakathi kwexesha elidlulileyo nelikhoyo lobomi boluntu olumnyama lwaseMelika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Olu luthotho oluwongwe kwi-Golden Globes ka-2022
Ilitye elimhlophe: Imveliso yenkwenkwezi yekhaya lakho